ဆန့် - အဆစ်များ၏ mobility ၏လွှဲခွင်တစ်တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆန့်အရှုံး, အပြာရောင်ဆန့်ရွတ်ကှဲထှကျသို့မဟုတ် dislocation ထဲကရရန်အခွင့်အလမ်းမြင့်မား။ ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ၏အားကစားသမားများရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြတယ် ဆန့် ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်, တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသင်တန်းနှင့်ကြွက်သားများဆန့်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများကို၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြွက်သား၏ "ဖိနှိပ်မှု" ၏ပြည်နယ်။
အဆိုပါအသစ်ရောက်ရှိလာသောကြောင့်ထို့နောက်သင်တန်း၏, ခြစ်ရာကနေဆန့်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ဖော်ပြချက်မှာပေါ်ထွန်းသောပထမဦးဆုံးအသင်းပြိုကွဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင်ဘို့ကြိုး - ကနာကျင်မနှစ်မြို့ဖွယ်များနှင့်စိတ်ထိခိုက်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအမှု၌ကိုယ့်ကိုယ်အပေါ်ဖိအားကိုမထားကြဘူးနဲ့ဆန္ဒကြိုးရန်ဖြစ်ပါသည်နှောင့်ရှက်ကြဘူး။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သင်တကိုယ်လုံး၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုတိုးပွါးစေ, သာထို့နောက်သင် Spar ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသောအရင်ကဆိုရင်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းဆန့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ရှိသည်။
passive ဆန့် - "လိပ်ပြာ" သို့မဟုတ်ယင်းတောင်စောင်းများတွင်နောက်ကျောအပေါ်နှိပ်ထားတဲ့သဘောထားကို၌မိမိခြေတို့ကိုမှရတဲ့, သင့်မိတ်ဖက်ဆန့်;
တက်ကြွ - သင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်သရုပ်ဆောင်ကြွက်သား lengthening, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဆန့်;
static ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း - သငျ 15 ကြွက်သားများတွင် "တောင့်တင်း" ကိုကယ်တင် - 60 စက္ကန့်,
ballistic န့ ်. - က jerks နှင့် springy တောင်စောင်း;
dynamic ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း - သင်တဖြည်းဖြည်းတယောက်ကိုတယောက်အနေအထားကနေရွှေ့ထားတဲ့ပြီးနောက်အနည်းငယ်ဗို့ရောက်ရှိသောစိတျ, ။
ဒါကြောင့်ပဲစကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ - တစ်အစပြုသူအဘို့, အဲဒီပြောင်းလဲနေသောဆန့်ပဲ့ထိန်းသော။ ကငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - သင်ကခြစ်ရာကနေစတင်နေကြသည်သောသူတို့အဘို့လေ့ကျင့်ခန်း၏အရှိဆုံးလုံခြုံပုံစံသတိရဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျကိုယျခန်ဓာအနေအထားကျူးလွန်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားမှလူရှုပ်စရာမလိုဘဲတစ်ဦး splay နှင့်လမ်းပိုင်းလက်တွေ့ကျကျသုညလျှော့ချသောစွန့်စားမှုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ။ သို့သော်ဒိုင်းနမစ်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ဆန့် dynamic - ကအလွန်လှပပါတယ်။ ဒါဟာကျွမ်းဘားတျအပွောငျးအလဲဖြစ်ပါသည်, လက်ဝါးကပ်တိုင်၌အ longitudinal အုပ်စုခွဲများ၏လိပ်တစ်ဦးစကား၌အတွက်သွားနှင့်ကမှတက်ရ!
ဖြောင့်ဖြစ်, ခြေထောက်ရှေ့ကိုပိန်ကြုံသယ် exhale, ထိုမွှန်အပေါ်မှာလက်ရပ်လာခဲ့, ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှံ့။ ခြေထောက်ပေါ်လိပ်ပြုလုပ်ခြင်း။ လက်၌လက်ကိုဆွဲ, ငါတို့လိပ်ဆက်လက်။ အဆိုပါရေတိမ်ပိုင်း၌ထပြန်ဆင်းသည်သူ၏လက်နက်ဆန့်ထည့်သွင်းခြင်း။
ရှေ့လူတို့လက်ဆင်းဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကွေးနှင့်ရှေ့ဆက် ထား. ကျောခြေလျင်ကိုဆန့် springy လှုပ်ရှားမှုများ။
ကျနော်တို့ခြေသူမ၏နဖူးကိုဆွဲဆောင်, လက်ချရေးဆွဲနေကြတယ်, လက်ဝဲမှလက်ျာခြေမလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ပြန်ရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသူမလက်ကိုတင်, လက်ျာကွေးနှင့်ပေါ်မှာထိုင်။ မိမိလက်တက်ဆွဲ, ရာထူး fix ။ ကျနော်တို့အပေါ်အိပ်တင်ပါး align ဖို့ကြိုးစား, ဗဟိုမှရှေ့ဆက်ထားလက်ျာပခုံး, လက်ျာခြေမပေါ်မှာဆင်း။
ရှေ့ဆက်လက်ဝဲခြေမလွှဲပြောင်း, လက်ျာပခုံးပေါ်မှာခြေကိုတင်, ငါတို့ခြေထောက်ပေါ်နှိပ်လက်ပေါ်တွင်အိပ်။
ကျနော်တို့လက်ျာခြေမအပေါ် upr.2 ကနေအရာအားလုံးသယ်ဆောင်။
half-ကွေးခြေထောက်အတူတူတစ် rhombus, ခြေဖွဲ့စည်းသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ချပြီးနေကြသည်။ ခြေဖို့ဆင်ခြေလျှောပြုလုပ်ခြင်း။
ဤအခြေအနေမှထွက်ဂရုတစိုက်အတွက်ထွက်ရှူ ", တာကခုနှစ်" ခြေထောက်ကိုစုဆောင်းပါ။
အများအပြားအရင်ကဆိုရင်အရှုံးမပေးစေသည်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ရန်အတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် , သင်လိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ "လမ်းပိုင်း" ၏ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုရက်အနည်းငယ်အနားယူပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, သင်ခြစ်ရာကနေနောက်တဖန် start ရန်ရှိသည်အားလုံး။ ဒါကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းဆုံးနိမ့်ဆုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့ပျင်းရိမဖွဘူး။
နံနက်ယံ၌ run ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘယ်လို lunge သလော
တစ်ဦး fitball အပေါ်တင်ပါးများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ run ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ထူးအိမ်သင်ခါး - အောင်မြင်ရန်ဖို့ဘယ်လို?
ဒဏ်ငွေဆံပင် 2014 ဖီး
ကယ်လ်ဆီယမ် gluconate - ထိုးဆေး
ဂျေဆန် Clarke နဲ့ Emilia Clarke